Yolanda Fitness, natsangana tao 2010, izao dia manana orinasa lehibe 3 misy mihoatra ny 500mpiasa. Hatramin'ny nananganana anay dia nifantoka tamin'ny vokatra manatsara ny fiainana izahay. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, nikendry ny sehatry ny lamba ao an-trano izahay ary nanolotra serivisy ho an'ny mihoatra ny800 mpanjifa any ampitan-dranomasina.
Yolanda Fitness, natsangana tamin'ny 2010
Ankehitriny dia manana orinasa lehibe 3 misy mpiasa maherin'ny 500
Nanome serivisy ho an'ny mpanjifa 800 mahery any ivelany.
Taorian'ny fahombiazan'ny vokatra lamba an-trano dia mifantoka amin'ny vokatra fanatanjahan-tena ihany koa izahay izao, izay manampy ny atleta maro kokoa hahatsapa fiainana milamina sy mahazo aina. Izahay izao dia manitatra ny tsipika famokarana ary manamboatra fitaovana fanatanjahan-tena avo lenta avo kokoa eny an-tsena.
Eto amin'ny Yolanda Fitness dia manolo-tena izahay hanao mora amin'ny fanazaran-tena ao an-trano. Amin'ny alàlan'ny fanolorana fitaovam-panatanjahan-tena isan-karazany ao an-trano dia ataonay tsotra ho anao ny mampiorina tsara ny vatanao. Manaova veloma an'io kilao dimy ambin'ny folo kilao hafa izay efa sahiranao very sy miarahaba ny vy tsy misy vy miaraka amin'ireo fitaovanay mahatalanjona sy mivantana. Ny fiainana dia tototry ny fisondrotana ambony ambany miaraka amin'ny fihenjanana sy fanahiana. Ny fanatanjahan-tena dia fanalahidin'ny fanamaivanana ny fihenjanana voajanahary amin'ny alàlan'ny fahafahany mamoaka endorphins mandritra ny fampihetseham-batanao.
Ny rafitra famokarana mandroso indrindra ataonay dia mahatonga ny fitaovan'ny Yolanda Fitness ho azon'ny rehetra idiranay satria mino izahay fa ny vatana salama dia mitarika amin'ny saina salama ary ny olona tsirairay dia mendrika ny hanana filaminana anaty. Izany no antony hanatrehan'ny Yolanda Fitness anao sy ny filanao fanatanjahan-tena.
Izahay dia mitazona ny tanjona "kalitao aloha, serivisy aloha", manompo ny mpanjifa erak'izao tontolo izao.
2010: Nanomboka an'i Yolanda tao an-tranony i Peak Kuang
2011: Nanofa ny biraony voalohany tao Hangzhou, Zhejiang i Yolanda
2012: Namboarina ny orinasa mpanamboatra voalohany
2013: Manana ekipa olona 100
2014: Ny fanamboarana fanamboarana faharoa dia namboarina mba hanao vokatra fitoviana
2015: tratra ny tanjon'ny fananana ekipa olona 300 sy tanjona kendren'ny varotra 100 tapitrisa dolara amerikana
2016: mitentina 150 tapitrisa dolara amerikana ny varotra
2017: Mifindra amin'ny foibe vaovao misy mihoatra ny 4000m2
2018: Mitentina 250 tapitrisa dolara amerikana ny varotra
2019: Namboarina ny orinasa mpanamboatra fahatelo
2020: nokapohina tao amin'ny ekipa 500 i Yolanda